‘भारतले वार्ता र संवादलाई वास्ता गरेन भने यो सीमा सम्बन्धी विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ’– नविना लामा - Kamana News
‘भारतले वार्ता र संवादलाई वास्ता गरेन भने यो सीमा सम्बन्धी विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ’– नविना लामा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निर्विवाद रूपमा धेरैभन्दा धेरै युवापुस्ताका नेता भएको पार्टी हो । तिनै युवा पुस्ताका सम्भावना भएका नेतामध्ये एक हुन् नविना लामा । खरो बोल्ने र हक्की स्वभावकी नविना लामालाई उनको बोलीको पासोमा उन्नेको पनि कमी छैन । तर, नेपाली राजनीतिमा महिला नेतृत्व खडेरी परेको बेलामा भोलिको राजनीतिलाई सही दिशामा डोर्याउन सक्न निडर नेतृत्वको रूपमा भोलिको पुस्ताले उनलाई चिन्नेछन् । उनै लामासँग कामना न्यूजका लागि उज्जवल कडरियाले देशको समसामयिक अवस्था र राजनीतिको विषयमा गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
१. नेकपाले सरकार परिवर्तनका विषयमा उठाएको कुरा जायज कति थियो ?
विश्व अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कहर काटिरहेको छ । नेपाल पनि अहिले कोरनाका कारण संकटग्रस्त र संवेदनशील अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । संसारभर कोरोना भाइरसको त्रास दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । त्यसैले देशको सम्पूर्ण शक्ति एकजुट भएर कोरोना कहरबाट देशलाई मुक्त गराउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसको विपरीत हामीले अरु कार्य गर्ने गलत कार्य गर्नु हुँदैन । देशका अहिलेका प्रधानमन्त्री र पार्टीका प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ज्यूको राजिनामा माग्ने जुन गलत किसिमको काम हुँदै आइरहेका छन् यी नितान्त राम्रा उद्देश्यका साथ आएका होइनन् । यो विश्वव्यापी दुस्मन कोरोना भाइरसका विरुद्ध लड्ने समय हो, राजीनामाको विषयबारे बहस गर्ने समय हैन ।
२. स्थायी कमिटीमा पार्टी र सरकार परिवर्तन सम्बन्धमा छलफल भएको थिएन र ?
स्थायी कमिटीमा आधिकारिक ढंगले छलफल भएको कुरा मलाई थाहा भएन । व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूले कुरा उठाउनुभयो होला । त्यो उहाँहरूको सरोकार र चासोको विषय हो । पार्टी र सरकारको गठन र पुनर्गठन गर्ने काम प्रक्रियाअन्तर्गत हुने कुरा हुन् । जहाँसम्म पार्टी पुनर्गठनको कुरा छ– त्यो त महाधिवेसनले गर्ने काम हो । त्यसै गरी सरकार परिवर्तन चुनावले गर्ने हहो । सरकार परिवर्तन चुनावपछि हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । आजको समयमा तल्ला कमिटीले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । धेरै नेता कार्यकर्ताले जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छैन । त्यसमाथि दुवै अध्यक्ष सहमतिमा बनाइएको थियो । यस्तो विषम परिस्थितिमा पार्टी र सरकार परिवर्तनका विषयमा प्रश्न खडा गर्नाले पार्टीलाई दुर्घटना गराउन सक्छ । यसकारण राजिनामाको बारेमा छलफल गर्नु उचित हुँदैन । अझ नेकपाका नेता त अनुभवी र बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पार्टीलाई यस्तो मोडमा पुर्याउनु हुन्न भन्नेमा मलाई पूर्ण विश्वास छ । आज पार्टी अत्यन्तै जिम्मेवार घडीमा उभिएको छ । अहिलेको मागअनुसार पार्टी र सरकारको सम्बन्ध सुमधुर बनाई दुई तिहाई नजिकैको सरकारलाई सुम्पिएका जिम्मेवारी नबिर्सी पूरा गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । यसको लागि हामी सबै नेता कार्यकर्ता एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । अहिले हामीले जनताले दिएको पाँच वर्ष समयभित्र सरकारलाई सम्पूर्ण कार्यसम्पादन गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसभन्दा अघि सरकार परिवर्तन र पार्टीका प्रथम अध्यक्षको राजीनामाका बारेमा सोच्नु भनेको पार्टी एकता र सरकार विरोधी हुन हो । अन्ततः पार्टी एकता र सरकारविरोधी हुनु भनेको हालका लागि आफ्नै देशमाथि गद्दारी गर्नु हो ।
३. केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरोधी आवाज जनमानसमा त थियो नै । अहिले नेकपाभित्र पनि गुन्जिन थालेको छ। हैन ?
नेकपा इतिहासदेखिको जिउँदो अस्तित्व भएको पार्टी हो । जिउँदो वस्तु चलमलाउन खोज्नुलाई गलत सोच्नेले युवा पिँढी र देशको भविश्यको बारेमा कसरी सोच्न सक्छ ? जिउँदो जाग्दो चरित्र भएको पार्टीमा बहस र छ्लफल निरन्तर चलिरहेको हुन्छ । यो त लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । यो सुन्दरताको प्रयोग गरी पार्टी एकता विरोधी कार्य हुनु पो भत्सर्ना योग्य होला त । पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक चरित्रको गलत प्रयोग गरी पार्टी, नेता, कार्यकर्ता र जनताको भावनालाई ठेस पुर्याउने दुस्साहस कसैले गर्नु हुँदैन । पार्टीको आन्तरिक एकतामा खलल पुग्ने गरी नानाभाँती बहस र छलफल चलाउनु हुँदैन । तर, सकारात्मक छलफल र बहस पार्टीको आन्तरिक जीवनको एक हिस्सा हो । पार्टीका खातिर ठूलो योगदान गर्नुभएका नेताहरूले यी कुरा मनन गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
४. सीमाअतिक्रमणको विषयले जनता आक्रोशित हुँदै गहिरहेका छन् । यस विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले तारबारसहित दीर्घकालीन रूपमा सीमा बन्द गर्नुपर्छ भनिरहेको छ । यो कतिको व्यवहारिक हुन्छ ?
सन १९१६ मा भएको सन्धिमा लिपुलेक, कालापानी लगायतका भुमी नेपालको अधीनमा हुने उल्लेख छ । भारत नेपालको पूरानो राजनीतिक सांस्कृतिक सम्बन्ध भएको मित्र रास्ट्र हो । यो कुरा मध्यनजर गर्दै दुवै पक्षले वार्ता र संवादद्वारा समस्याको हल निकाल्नुपर्छ । भारतले वार्ता र संवादलाई वास्ता गरेन भने यो सीमा सम्बन्धी विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । नदी जता जता बग्यो त्यता त्यता नक्सा कोर्ने काम हुँदैन । नेपालीको नक्सा सन १९१६ मा भएको सन्धिअनुरुप नै बनाउनुपर्छ । भारत विस्तारवादी नीति छोडन सक्दैन भने त्यसविरुद्ध सम्पूर्ण नेपाली एक भएर लड्नुपर्ने हुन्छ । पटकपटक सीमाको विषयमा आन्दोलन गरेर बस्नु उचित हुँदैन । अब यस समस्याको दीर्घकालीन रूपमा हल गर्दै सीमा समस्याको अन्त्य गर्नुपर्छ । राष्ट्रियताभन्दा ठूलो र महत्व अरु कुराले राख्दैन । राष्ट्रियता नै गिर्ने गरी भारतसँग सम्बन्ध बचाइराख्नुपर्छ भन्ने छैन । राष्ट्रियतामा कांग्रेस कम्युनिस्ट नभनी एकजुट हुनुपर्छ र सहमतिमा विदेश नीति र छिमेकीसँगको सम्बन्ध सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ । अब भारत र नेपाल दुवै पक्षको सहमतिमा सीमा कहिल्यै विवादित नहुने गरी सिमांकन गरिनुपर्छ ।
५. यसअघिका बजेटले खासै लोकप्रियता हासिल गर्न सकेनन् । यस वर्षको बजेट कतिको लोकप्रिय हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
यसको यस्तै हुन्छ भनेर ठ्याक्कै जवाफ दिन त सक्दिनँ किनभने म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन । तर, कोरनाको प्रभावले ग्रसित अर्थ अर्थव्यवस्था उकास्ने गरी नेपालको क्षमता अनुरुपको सुहाउँदो बजेट आएको छ भन्न चाहिँ सक्छु । जनताको मौलिक अधिकार स्वास्थ क्षेत्रमा केन्द्रित बजेट अहिलेको आवश्यकता हो । कोरोना पेन्डामिकको निशुल्क स्वास्थ उपचार व्यवस्थासहितको बजेट ल्याउन सकेकाले त्यसले लोकप्रियता हासिल गर्छ । निजी अस्पतालको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कदमले जनतालाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको अत्याचारले समाजवाद उन्मुख स्वास्थ्य व्यवस्था ल्याउने कार्यमा बाधा उत्पन्न हुन सक्छ । आफ्नो कर्तव्यको ख्याल नगर्ने अस्पतालहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग राखी उठेको आवाजलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । निजी सम्पत्तिलाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न सकिने गरी बजेट बिनियोजित गरिएको छ । विशेष गरी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य केन्द्रित बजेट आयो– राम्रै हुन्छ ।
६. तपाईंको सदनमा किन कम उपस्थिति भैरहेको छ ?
शारीरिकरुपमा अहिले मैले आराम लिनुपर्ने भएकाले सदनमा मेरो उपस्थिति कम देखिएको हो । महत्त्वपूर्ण बैठकमा मात्र उपस्थित जनाइरहेको छु । स्वास्थको बढी ख्याल गर्नुपर्ने भएकाले कम जाने गरेको छु । म अहिले गर्भवती छु । गर्भवती अवस्थामा आउने विभिन्न समस्याहरूका कारण संसदमा मेरो कम उपस्थिति भएको हो ।
७ तपाईंलाई केपी शर्मा ओलीको ‘भक्त’ र ‘हनुमान’ हो भन्ने गरिँदै आएको छ, सत्य हो ?
नेता भनेको संस्था हो, संस्था भनेको नेता हो । नेता र संस्थालाई खुइल्याएर समृद्धिको उचाइमा पुगिँदैन जसरी आधार शिविर भत्काएर सगरमाथाको चुचुरोमा पुगिँदैन । पार्टीका अग्रज र संस्था हाम्रा आस्थाका तिनै सगरमाथा हुन् । केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारयणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोख्रेल, विष्णु पौडेल, बादल, बामदेव गौतम र अरु जो भय पनि सम्माननीय हुनुहुन्छ– आदरणीय हुनुहुन्छ । तर, सबै मन पर्छ भन्दैमा सबैलाई चुन्न त सकिँदैन नि । पार्टीको विधान अनुरुप निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचनमा कुनै एकलाई भोटिङ गर्नुपर्छ । यस क्रममा स्वभाविकरूपमा कोही एकजना नेताप्रति अलिकति बढी र विशेष झुकाव त रहिहाल्छ नि । त्यसकारण कुनै नेताको नजिक हुँदैमा उहाँहरूको भक्त र हनुमान भइँदैन जस्तो मलाई लाग्छ । कोरोनाले ग्रसित मुलुकलाई त्यसबाट जोगाउन, पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउन खातिर केपी शर्मा ओलीलाई सरकार र पार्टी अध्यक्षबाट राजिनामा गर्न लगाउन स्विकार्य हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो । त्यो भनाइमा म अडिग छु । अहिलेको अवस्था आफू–आफूमा शक्ति समीकरणको अभ्यास गर्ने समय होइन । सबै एकजुट भई कोरोनाविरुद्ध लड्न पार्टी र सरकारलाई सहयोग गरौँ भन्दा ‘भक्त’ वा ‘हनुमान’को आरोप लगाउनुको कुनै तुक रहँदैन । कसैको भक्त वा हनुमान हुन मलाई मेरो राजनीतिक ज्ञान र स्वभावले दिँदैन । अहिलेलाई यति बुझौँ – म प्रधानमन्त्रीको रास्ट्रियताप्रतिको लगाब, उहाँको लोकप्रियता, लगनशीलता, जुझारुपन, दुरदर्शिता, कुशलता, इमानदारिता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुशलता लगायत क्षमताको प्रशंशक हुँ । उहाँमा यी माथिका क्षमता प्रशंसनीय छन् भन्ने कुरा तमाम नेतृत्व वर्ग र समृद्धि चाहने कार्यकर्ताले बुझ्न जरुरी छ मेरो कुरा हो ।
शनिवार, जेठ ३ २०७७०८:४२:३२
डर्टमुन्डको सानदार जित
कोरोना संक्रमित कर्मचारीलाई १४ दिन बिदा दिने प्रस्ताव
कोरोना सङ्क्रमितलाई तारकेश्वर नगरपालिकाले ५ हजार दिने